Xog: Somaliland oo Turkiga u dirtay wafti kala hadlaya xiisado xasaas ah oo taagan - Caasimada Online
Home Somaliland Xog: Somaliland oo Turkiga u dirtay wafti kala hadlaya xiisado xasaas ah...
Xog: Somaliland oo Turkiga u dirtay wafti kala hadlaya xiisado xasaas ah oo taagan
Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumada Somaliland ayaa wafdi aan la shaacin u dirtay dalka Turkiga, kaasi oo dowladdaasi ka shaafin doona isbadalada xawliga ku socda ee geeska iyo wada-hadallada Dowladda federaalka iyo Somaliland, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Sida ay xogta ku helayso Caasimada Online, wafdigaasi oo uu hogaaminayo Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Yaasiin Faratoon ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaan madax ka tirsan dowladda Turkiga, gaar ahaan Wasaarada arrimaha dibedda.
Wafdigaasi ayaa dowladda Turkiga kala hadli doona dib usoo celinta meeqaamkii ay ku laheyd wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo dib uga furmay dalka Jabuuti, isaga oo si rasmi ah uga dhex muuqan Turkigu, oo awal ahaa dhex-dhexaadiyaha wada-hadalladaasi.
Somaliland ayaa madaxda Turkida la wadaagi doonta inaysan wax tabasho ah dhankooga ka qabin, maadama ay muddooyinkii dambe soo baxeysay in Turkigu uu saaxiib dhow la ahaa dowladda federaalka oo ay si weyn isku hayaan xukuumada Somaliland.
Sidoo kale waxay wafdigaasi kala hadli doonaan xubnaha dowladda Turkiga ee ay la kulmayaan saldhiga millateri ee la sheegay in Somaliland ay dowladda Masar ka siinayso deegaanadeeda, maadama ay Turkiga iyo Masar isku hayaan xiisada Liibiya, sida ay xogta ku helayso Caasimada Online.
Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyay u muuqatay mid qeyb ka aheyd isbeddelada iyo dhaq-dhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda gobolka, taasi oo dhalisay in dowladdo quwad leh ay walaac ka muujiyaan, maadama ay wadamo is hayaan ay saaxiibo dhow noqdeen.